ESI WEPU OKU SITE NA IPHONE SITE N'AKA AYTüNS - ITUNES - 2019
Maka oge mbụ na-arụ ọrụ na iTunes, ndị ọrụ nwere nsogbu dịgasị iche iche metụtara iji ụfọdụ ọrụ nke usoro ihe a. Karịsịa, taa, anyị ga-elebakwuo anya na ajụjụ nke otu ị nwere ike ihichapụ egwu site na iPhone gị iji iTunes.
iTunes bụ otu mgbasa ozi na-ewu ewu bụ onye isi nzube ya bụ ijikwa ngwaọrụ Apple na kọmputa. Na mmemme a ị nwere ike ọ bụghị naanị iṅomi egwu na ngwaọrụ gị, ma wepụ ya kpamkpam.
Esi ewepu iTunes site na iTunes?
Hichapụ egwu niile
Tinye iTunes na kọmputa gị ma jikọọ iPhone na kọmputa gị site na iji eriri USB ma ọ bụ jiri mmekọrịta Wi-Fi.
Nke mbụ, iji mee ka anyị wepụ music sitere na iPhone, ị ga-achọ ikpochapụ akwụkwọ ọgụgụ iTunes gị kpamkpam. Na otu n'ime isiokwu anyị, anyị ejiriwo nkọwa zuru ezu mee ihe banyere nke a, ya mere na nke a, anyị agaghị elekwasị anya na ya.
Hụkwa: Otu esi wepu music site na iTunes
Mgbe ị na-ekpochapụ ọbá akwụkwọ iTunes gị, anyị ga-emekọrịta ya na iPhone gị. Iji mee nke a, pịa akara ngosi ngwaọrụ na mpịakọta nke mpio ahụ iji gaa na njikwa ọrụ ya.
Na mpịakọta aka ekpe nke window ahụ meghere, gaa na taabụ "Egwú" ma fanye igbe ahụ "Mekọrịta egwu".
Jide n'aka na ị nwere ebe dị nso "All Library Library"wee banye n'akụkụ ala nke windo pịa bọtịnụ ahụ. "Tinye".
Usoro mmekọrịta amalite, mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ehichapụ egwu niile dị na iPhone gị.
Nhichapụ nhọrọ nke egwu
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapụ site na iTunes si na iPhone, ọ bụghị ihe niile egwu, ma ọ bụ naanị ndị nhọrọ, mgbe ahụ, ị ​​ga-eme ihe na-abụghị na mbụ.
Iji mee nke a, ọ dị anyị mkpa ịmepụta listi ọkpụkpọ nke ga-agụnye abụ ndị ga-abanye na iPhone, ma mezie listi egwu a na iPhone. Ee anyị kwesịrị ịmepụta listi egwu ọkpụkpọ egwu egwu ndị ahụ anyị chọrọ ka ihichapụ na ngwaọrụ ahụ.
Hụkwa: Otu esi tinye kọmputa gị na iTunes
Iji mepụta listi ọkpụkpọ na iTunes, na mpaghara aka ekpe nke windo mepee taabụ ahụ "Egwú", gaa na sub-taabụ "My music", na na aka ekpe, mepee ngalaba achọrọ, dịka ọmụmaatụ, "Egwú".
Jide igodo Ctrl maka mma na keyboard ma gaa n'ihu ịhọrọ egwu ndị a ga-etinye na iPhone. Mgbe ịmechara nhọrọ ahụ, pịa aka nri na egwu a họọrọ ma gaa "Tinye na listi egwu" - "Tinye listi ọhụrụ".
Ndekọ ọkpụkpọ gị ga-apụta na ihuenyo. Iji gbanwee aha ya, pịa aha ọkọlọtọ, wee tinye aha ọkpụkpọ ọhụrụ ma pịa bọtịnụ Tinye.
Ugbu a, ọnọdụ nke ịnye ndepụta egwu na egwu na iPhone abiala. Iji mee nke a, pịa akara ngosi ngwaọrụ na mpịakọta elu.
Na njikwa aka ekpe, gaa na taabụ "Egwú"wee lelee igbe ahụ "Mekọrịta egwu".
Tinye ebe dị nso "Nhọrọ listi ọkpụkpọ, ndị ọkpụkpọ, albums na ụdị", na ntakịrị n'okpuru, kwanye ndepụta egwu na nnụnụ, nke a ga-ebufe na ngwaọrụ. N'ikpeazụ, pịa bọtịnụ ahụ. "Tinye" ma cherere oge mgbe iTunes kwusịrị ikwekọrịta na iPhone.
Kedu esi ehichapụ egwu site na iPhone?
Nwepu iwepụ anyị agaghị ezu ezu ma ọ bụrụ na anyị echeghị ụzọ iji wepụ songs na iPhone n'onwe ya.
Mepee ntọala na ngwaọrụ gị ma gaa na ngalaba "Isi ihe".
Ọzọ ị ga-emeghe "Nchekwa na iCloud".
Họrọ ihe "Jikwaa".
Ihuenyo na-egosiputa ndepụta nke ngwa, yana oke ohere ha nwere. Chọta ngwa "Egwú" ma mepee ya.
Pịa bọtịnụ ahụ "Gbanwee".
Iji bọtịnụ ọbara ọbara, ị nwere ike ihichapụ ma egwu ma nhọrọ.
Anyị nwere olileanya na isiokwu a bara uru nye gị, ma ugbu a ị maara ozugbo ọtụtụ ụzọ ga-enye gị ohere ihichapụ egwu sitere na iPhone gị.